Sidee looga soo ceshaa sawirada la tirtiray ee WhatsApp ee ku jira Android iyo iPhone | Golaha Moobaylka
Sidee looga soo ceshan karaa sawirro laga tirtiray WhatsApp
Qolka Ignatius | | WhatsApp
Hadaad mudo iskudayey ka soo kabsado sawirro tirtiray WhatsApp mana jirto wado lagu helo, waad gaadhay maqaalka la tilmaamay. Ka soo kabashada WhatsApp ama sawir laga tirtiray WhatsApp waxay kuxirantahay dhowr arimood, kuwa badan oo laga yaabo inaadan ka warqabin laakin kuu ogolaan doona inaad soo ceshato nuxurka kaa lumay, maadaama uusan waqti dheereyn.
Laakiin ugu horreyntii, waa inaan ogaanno waxa uu yahay nidaamka qalliinka qalabkeenna, maxaa yeelay waxay kuxirantahay inuu yahay iPhone ama taleefan casri ah oo ay maamusho Android, nidaamka ayaa ka duwan, maadaama xitaa haddii ay isku cod tahay, daaweynta ay ka sameeyaan faylasha gabi ahaanba way ka duwan tahay.
1 Ka soo kabashada Sawirrada la tirtiray ee WhatsApp ee Android
1.1 Ka raadi bogga sawirada
1.2 Raadi Sawirrada Google ama adeegyada kale ee kaydinta daruuraha
1.3 Adeegso softiweerka soo kabashada sawirka
1.4 Soo celinta kaydinta
2 Ka soo kabashada Sawirrada la tirtiray ee WhatsApp ee iPhone
2.1 Ka raadi sawirka
2.2 Ka raadi waxyaabaha la tirtiray
2.3 Raadi iCloud, Sawirrada Google, ama adeegyada kaydinta
2.4 Raadi kombuyuutarkaaga
2.5 Soo Celinta kaabta WhatsApp
3 Codso nuqul
4 Websaydhka WhatsApp, sidoo kale kama heli doontid
Ka soo kabashada Sawirrada la tirtiray ee WhatsApp ee Android
Ka raadi bogga sawirada
Asal ahaan, WhatsApp ayaa loo qaabeeyey sidaas wuxuu si otomaatig ah u kaydiyaa sawir kasta iyo muuqaal kasta in aan ka helno arjiga galka WhatsApp Images iyo WhatsApp Vidiyo galka, faylal kala duwan oo ah halka ay ku keydsan yihiin dhammaan sawirada iyo fiidiyowyada aan ku sameyno qalabkeenna.
Haddii aadan wax ka beddelin xulashadaas, waxay u badan tahay sawirku wuxuu ku jiraa galkaas, galka aad si toos ah uga heli karto arjiyada ku jirta qalabkaaga, ama maareeyaha faylka, oo Faylasha ka socda Google ay yihiin mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican.
Raadi Sawirrada Google ama adeegyada kale ee kaydinta daruuraha
Haddii aad isticmaasho Sawirada Google, waxaan rajeyneynaa, haddii aan ogaanno taariikhda aan helnay sawirkaas, waxay u badan tahay taas haddii aynaan iswaafajinta ka hawlgelin labada dhinacba, sawirkaasi wali wuxuu kujiraa daruuraha Google.
Haddii aadan isticmaalin Sawirada Google laakiin adigu waad isticmaashaa OneDrive, Dropbox, ama Sawirada Amazon, waxaad eegi kartaa adeegyadan si aad u hubiso haddii sawirka la tirtiray uu diyaar yahay.
Adeegso softiweerka soo kabashada sawirka
Haddii aysan jirin hab lagu soo celiyo sawirada aad tirtirtay maalintaada, waxay u badan tahay inay tahay waqtigii la isticmaali lahaa codsiyada noo ogolaanaya inaan ka soo kabano feylasha la tirtiray iyada oo loo marayo codsiyo gaar ah iskaan qalabka dhammaan waxyaabaha la tirtiray hore in dib loo soo celin karo.
Soo celinta kaydinta
Sidii aan kor uga hadlay, marba haddii aysan dheereyn tan iyo markii aan aragtida ka weynay, waxaa suuragal ah inaan fursad u helno inaan dib ula soo noqonno. Nasiib darrose, Android kuma jiraan qashin-qubka halkaasoo dhammaan faylasha aan ka tirtirno qalabkeennu aadaan, markaa tani ikhtiyaar ma ahan.
Hal ikhtiyaar oo lagu soo kaban karo sawirka la tirtiray ayaa ah soo celin gurmad ah by WhatsApp. Dhibaatada aan helno marka aan hawshan wadno waa laba:
Waan lumineynaa wadahadalka oo dhan in aan haynay ilaa keydkii ugu dambeeyay.
Haddii keydkii ugu dambeeyay waa dhowaan, waxay u badan tahay in dib loo soo celiyo nuqulka, wali ma heli karno sawirka aan raadineyno.
Haddii aan caddayno inaynaan dhib u qabin luminta wadahadalladii ugu dambeeyay, waa inaan marka hore la tashannaa taariikhda keydkii ugu dambeeyay la sameeyay WhatsApp koontadayada Google Drive, maadaama haddii ay dhowaan tahay, aan waxtar lahayn in la soo celiyo.
Kaydinta WhatsApp ee Google Drive, lama arki karo isticmaalaha, taasi waa, in kasta oo lagu keydiyay akoonkeena Google, haddana ma heli karno wakhti kasta, markaa ma hubin karno waxyaabaha ku jira.
Ka soo kabashada Sawirrada la tirtiray ee WhatsApp ee iPhone
Ka raadi sawirka
Sida ku jirta Android, meesha ugu horeysa ee ay tahay inaan iska hubino haddii sawirka laga helo ayaa ku jirta macruufka gallery, oo loogu yeero Sawirro ku dhex jira albumka WhatsApp, halkaas oo dhammaan sawirada aan gacanta ama si otomaatig ah uga soo dejino WhatsApp ay ku kaydsan yihiin
WhatsApp ee iOS, sida Android, wuxuu si toos ah u kaydiyaa dhammaan sawirada laga helay qalabka, sidaa darteed haddii aadan fureynin ikhtiyaarkaas si aad u badbaadiso booska, waxay u badan tahay in lagu heli karo codsigan.
Ka raadi waxyaabaha la tirtiray
Si ka duwan Android, macruufka wuxuu leeyahay qashin qub ah halkaas oo mid kasta oo ka mid ah faylasha la tirtiray, sawirada iyo fiidiyowyadu tagayaan, halkee waxaa lagu hayaa ugu badnaan 30 maalmood. Waqtigaas ka dib, sawirradu waxay gebi ahaanba ka baaba'aan aaladdayada.
Marka laga hadlayo sawirrada iyo fiidiyowyada, qashinka waxaa laga heli karaa arjiga Sawirada, qeybta La tirtiray.
Raadi iCloud, Sawirrada Google, ama adeegyada kaydinta
Hadaad leedahay iCloud sawir iyo u hagaagsan video kartiHaddii sawirku uusan ku jirin liiska, kuma jiri doono keydka iCloud sidoo kale. Si kastaba ha noqotee, haddii aad sidoo kale isticmaasho Google Photos ama codsi kasta oo kale oo lagu kaydiyo daruur sida DropBox ama OneDrive, waxay u badan tahay inaad ka heli doonto sawirka aad tirtirtay.
Haddii aadan isticmaalin iCloud laakiin si joogto ah nuqul sawirada iyo fiidiyowyada kombiyuutarkaaga waayo, booska ka bannee iPhone, waa inaad fiirisaa nuqulkan, maxaa yeelay sawirka aad raadineyso ayaa suuragal ah inuu jiro.
Sida Android, keydka WhatsApp ee lagu sameeyo iCloud waa wax aan la arki karin dadka isticmaala, sidaa darteed ma heli karno oo ma tashan karno dhammaan sawirada la keydiyay.
Xalka kaliya ayaa ah, sida kan Android, hubi taariikhda keydka ugu dambeeya oo dib u soo celi, in kasta oo ay tani macnaheedu tahay luminta wada hadaladii ugu dambeeyay ee aan ku soo marnay codsigan fariinta ah.
Si loo hubiyo taariikhda keydka ugu dambeeya waa inaan helnaa fursadaha qaabeynta codsiga, guji CHAT iyo Soo celinta.
Mararka qaarkood waxaan ka samaysannaa buur hal-ku-dheg ah. Xalka ugu fudud ee laga soo kaban karo sawir ama muuqaal aan ka tirtirnay WhatsApp, ayaa ah inaan dib ugu laabanno weydii qofka ama kooxda meesha lagu wadaagay.
Websaydhka WhatsApp, sidoo kale kama heli doontid
Shabakadda WhatsApp wax kale ma aha milicsiga ah ee app mobile biraawsar, sidaa darteed dhammaan waxyaabaha hadda lagu soo bandhigay arjiga, ayaa la muujin doonaa markooda haddii aan ka soo galno WhatsApp Web, markaa haddii aad ujeedo ka leedahay inaad ku soo kabato sawirkii la tirtiray adeeggan, horayba waad u ilaabi kartaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Shabakadaha Bulshada » WhatsApp » Sidee looga soo ceshan karaa sawirro laga tirtiray WhatsApp
Sida looga saaro "la arkay" barta Instagram
Sida loo shaashado shaashadda iPhone-ka ee TV-ga